Jawaar Mahaammad - Wikipedia
Jawaar Mahaammad ( Afaan Ingiliish: Jawar Mohammed) qabsaawaa mirgaa fi xinxalaa siyaasaati. Jawaar yaada "Ani jalqaba Oromoo dha" ykn 'I am Oromo First' yaada jedhu uumuun, ummata Oromoo naannoo biyya ambaa jiraatan baayyee kakaasuu fi sabboonummaa isaanii cimsuun fudhatama guddaa argate. Akkasumas, Jawaar gaaffiin mirgaa ummata Oromoo deebii akka argatu qeerroo hundeessee qabsaawuu bira darbe ummata Itoophiyaa cunqurfamaniif sagalee ta'uun beekkama.
Jawaar Mahaammad kan dhalatee caamsaa 12, 1986 oromiyaa godina harargee iddoo Dhummuuga jedhamu keessatti. Abbaan Jawaar baddaa Arsiirraa ka'anii gara gammoojjii daangaa Harargee jirutti kan godaanan yoo ta'u maatin haadhasaa ammoo gara Abbichuurraa bara Hayilsasillaasee keessa lafasaanirraa ari'atamanii gara sanatti kan godaanan turan. Kanaaf Jawaar karaa abbaasaa Arsiirraa kan dhalate yoo ta'u, karaa haadhasaa ammoo Tuulamarraa kan dhalate. Haatisaa amantii Ortodoksiirraa kan dhufte yoo ta'u, abbaansaa ammoo amantii Islaamarraa kan dhufe ture. Gama soddaatin Jawaar wallaggaa fi Guji dha.
Jawaar barnootasaa sadarkaa 1ffa magaalaa Asallaa mana barnoota kaatolik barate. Barnoota sadarkaa 2ffa Adaamaatti kan barate yoo ta'u. Bara 2003 carraa iskoolaarshiippii biyya alaa argateen gara Singaappoor deeme achitti barnootasaa itti fufe. Achumaan itti fufuun gara Ameerikaa deemee Kaalifoorniyaa keessatti Yuunivarsiitii Istaanfoorditti barate; kunis iskoolaarshiippidhaan ture. Jawaar hawwiinsaa ijoollummaa fiziksi barachuu yoo ta'eyyu guyyaa keessa fedhiinsaa jijjiiramaa deemee. Bara 2009 Istaanfoorditti saayinsii siyaasaan (political science) eebbifame. Yunivarsiti kolombiyaa irra digrii 2ffaan 2013tti ebbifame.
Oromo Talk Show Hosted By Dawite Mekonen
OMN: Weekly Amahric Program September 20, 2014
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Jawaar_Mahaammad&oldid=36847" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 24 Caamsaa 2021, sa'aa 07:52 irratti.